Guddiga joogtada ah ee Baarlamanka Puntland oo ansixiyay wax ka bedelka xeerka maalgashiga – Kalfadhi
Guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland ayaa maanta ansixiyay wax ka bedelka xeerka Dhiirigelinta maalgashiga oo ay xukuumaddu hore u soo gudbisay. Guddigan ayaa dib u eegis iyo falanqayn ku sameeyay meelaha wax laga bedelay ee xeerka.
Baarlamanku wuxuu rajaynayaa in xeerkan uu fududeeyo maalgashiga ah wadaniga ah iyo kan ajinebiga ah, sida uu sheegay Xoghayaha golaha wakiillada Cabdirisaaq Xiddig Warsame.
Baarlamankii koowaad ee Puntland ayaa meel-mariyay xeerkan mudo laga joogo 20 sano. Laakiin wax ka bedel ayaa meelaha qaar lagu sameeyay bilihii la soo dhaafay, si uu xeerku ula jaanqaadi karo waaqican.
Guddiga oo si joogta ah u kulmi jiray inta badan maalinta Isniinta ayaa fadhigan soo hormariyay, sababo la xiriira madasha maalgashiga Puntland oo Axadda furmaysa. Jiritaanka xeerkan ayaana qayb ka ah fursadaha ay xukuumaddu iibgeynayso si loo helo maalgashadayaal Soomaali iyo Ajinebi ah oo deegaanka yimaadda.
Guddiga oo gacan taag ugu codeeyay xeerka
Ansixinta guddiga joogtada ahi waa ku meel-gaar, waana la adeegsan karaa xeerrka sidan oo kale loo ansixiyo, balse kalfadhiga soo socda ayaa golaha wakiilladu dib ugu eegi doonaan xeerkan; taas la micno in weli xeerku u baahan yahay inuu kalsooni buuxda ka helo golaha oo dhan, sida uu dhigayo xeer hoosaadku.
Sanatar Nuura Faarax oo ka hadashay ciidamo ilaalo u ah oo laga wareejiyay